90 haween ah oo tababar loogu soo xiray Dharkenleey – Radio Muqdisho
Inkabadan 90 haween ah oo muddo baranayay tababar ku aadan toliinka harqaanka iyo maareynta ganacsiga ayaa maanta loogu soo gaba gabeeyay xarunta degmada Dharkenley haweenkan oo ka socday degmooyinka Shangaani,Wadajir,iyo DHarkenley.
Tababarkan ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas,uuliyiin katirsan maamulka gobolka Banaadir oo uu hor kacayay xoghaya guud ee maamulka gobolka isagoo sheegay in haweenkan la baray xirfado ay ku shaqeystaan si ay noloshooda ugu maareeyaan aqoonta la baray.
Gudoomiyaha degmada Dharkenley Aadan maxamed Cumar oo degmadiisa lagu qabtay tababarkan ayaa sheegay inuu wax weyn kusoo kordhin doono nolosha dadka maadaama ay aqoon kororsadeen.
Dhinaca kalena Xoghayaha guud ee gobolka Banaadir ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha kawaanka malaayga ee degmada Cabdi casiis halakasoo uu maamulka gobolku doonayao in dayactir lagu sameeyo maadaama uu horay u bur buray kawaankaasi oo aan muddo dayactir helin.
Dhageyso warka duhur ee Radiomuqdisho